Ahoana ny fiasan'ny Google Adwords Adrank?
Alatsinainy, Novambra 14, 2011 Asabotsy 4 Febroary 2017 Chris Bross
Nahita mpanjifa be loatra tonga tao aminay izahay taorian'ny nandaniam-bola taonina nihazakazaka nanentana ny karamany isan-tsindry (PPC) irery. Tsy hoe tsy nihaino na nitantana ny kaonty araka ny tokony ho izy izy ireo, fa ny tsy fahafantarany ny fiatraikany amin'ny valiny sy ny fanatsarana azy ireo fotsiny. Ny ankamaroan'ny olona dia mino fa ny karama isaky ny tsindry dia ady amin'ny tolotra fotsiny ary tsy tsapany akory fa, amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny doka, dia afaka miakatra ambony noho ny mpandoa avo indrindra izy ireo! Mila fitandremana sy traikefa be dia be ny fitantanana PPC raha te-hampiasa azy io tokoa ianao, hampihena ny vidiny ary hampiakatra avo kokoa ny taham-panovana!
Ireo olona ao amin'ny Pulpmedia natambatra ity sary ity izay manazava ny fahasarotan'ny Google Adwords, Adrank, ary ny fomba ahafahan'ny dokambarotrao mitombo avo kokoa.
Google Places & Pejy Google Plus ho an'ny orinasa (ho an'ny ankehitriny)
Zavatra 3 Run-DMC no nampianatra ahy momba ny haino aman-jery sosialy
5 Jan 2012 amin'ny 1:01 PM
Inona ny angona ampiasaina hamaritana ny fahatokisan-tena%?
5 Jan 2012 amin'ny 4:54 PM
Tsy azo antoka DisqueD1…. fanontaniana tsara ho an'ny PulpMedia!
19 Feb 2013 tamin'ny 5:59 maraina
Heveriko fa $ .01 no vola kely indrindra tokony ampidinao amin'ity raikipohy ity hahazoana ny tena vidiny ..
Mar 24, 2014 ao amin'ny 9: PM PM
Niresaka tamin'ny orinasa PPC marobe aho, fa ny zava-dehibe indrindra azonao atao amin'ny fampielezankevitra ara-barotra anao dia ny pejy fandraisana. Ny ankamaroan'ny orinasa dia mivarotra anao zavatra tokana 1 toa ny famolavolana tranonkala, na ny Google Adwords fotsiny, na ny popup fotsiny, na ny famerenam-bidy fotsiny sns. Tena mampihoron-koditra tanteraka izany satria na dia zavatra 1 aza no mety hampiova hevitra amin'ny fampielezana varotra marimaritra iraisana, tsy misy singa tokana dia singa iray manamboatra na manaparitaka ny varotra an-tserasera, mila ny fonosana rehetra ianao ary avy eo manandrata / manatsara avy ao. Nitombo mihoatra ny 60% ny vola miditra amin'ny orinasako tao anatin'ny roa volana raha vao nifidy masoivoho tsara nanao mihoatra ny PPC fotsiny aho, fa nanao ihany koa ireo pejin-tsaiko, famerenana ny saiko, doka amin'ny banner, sns. Raha ny tena izy dia nahazo ny nomeraon-telefaonin'i Simon eto aho, afaka miresaka aminy koa ianao. Antsoy fotsiny izy amin'ny 302-401-4478.
Sep 24, 2015 amin'ny 6: 59 AM
Lahatsoratra mahafinaritra… tena ilaina ..